आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैको बहुमत संभव !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैको बहुमत संभव !
डिसी नेपाल , ९ बैशाख २०७६
नेपाली कांग्रेसभित्र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा भएका त्रुटि र कमजोरीका विषयमा बहस चल्न थालेको छ। जायज र स्वभाविक अनि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आवाज समेत पार्टीभित्रै उठ्न थालेका छन्। सत्ता पक्षले विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउँदासमेत त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
पार्टीभित्रबाट पार्टी कमजोर हुनुका कारण खोज्न थालिएको छ र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। यसले कांग्रेस पुनः जनविश्वास आर्जन गर्दै नेतृत्वमा आउन सक्ने आशा गर्न थालिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले ‘खै कहाँ छ कांग्रेस’, ‘विचरा कांग्रेस’, ‘९२ पुगेको कांग्रेस दुईमा आयो’ जस्ता अभिव्यक्ति दिँदासमेत नेतृत्वले त्यसको प्रतिवाद गर्न नसकेको गुनासो कांग्रेसभित्र छ। कांग्रेस सभापतिले केही नयाँ कुरा दिन र ल्याउन वा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न/गराउन सक्नु भएन भन्ने कुरा देखिएको पनि छ।
अब यसरी पार्टी चल्दैन भनेर नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा इतरको समूह (जसलाई रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूह भनिन्छ) त्यसले अर्को सिटौला समूहलाई पनि समेटेर एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि र आम जनता विश्वस्त हुन सक्ने भूमिकाका लागि कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्ने? भन्ने कुरामा डा. रामशरण महत र डा. शेखर कोइरालाले नयाँ प्रयास थाल्नु भएको छ।
उहाँहरुले रामचन्द्र पौडेल, डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, अर्जुन नरसिंह केसीलगायतसँग छलफल र सल्लाह सुरु गर्नु भएको छ। युवा पुस्ताका नेता गगन थापा, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, शंकर भण्डारीलगायतका मानिससँग छलफल सुरु भएको छ ।
हिजो कांग्रेसले सशस्त्र द्वन्द्वमा मुलुलकलाई तहसनहस पारेर जंगलबाट शासन गर्न खोज्ने शक्तिलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याएर शान्तिको बाटोमा हिँडाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हो । मुलुकका पहिचान, हजारौं वर्षदेखिको इतिहास पहिचान मेटाएर शसस्त्र द्वन्द्वमा अगाडि बढिरहेको शक्तिलाई निशस्त्र गरेर राजनीतिमा मुलधारमा ल्याउन कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो।
त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुख्य भूमिका थियो। त्यो बेला जे जसो गर्न खोजिएको थियो, त्यसमा अहिलेको सत्ताधारी तत्कालीन एमालेले पनि साथ दिएको हो। त्यो बेला पूरै मुलुकले साथ दिएको थियो। सबैको साथ र सहयोगले गर्दा तत्कालीन राजा पछि हट्न सहजै तयार भए। शान्ति स्थापना हुन र गर्न कांग्रेस सफल भयो।
कांग्रेसले अब पार्टीकाे संगठन सुदृढ र सरकारलाई दबावमा राख्न सक्ने गरी कार्ययाेजना बनाउने हाे भने अागामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउने कुरालाई नकार्न सकिँदैन
अहिले त्यो अवस्था नरहेपछि कांग्रेसले पुनर्विचार गरेर मुलुकको भूगोल र संसारमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाएको अधिकार विहीन राजसंस्था, शान्तिका अग्रदूत भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, संसारको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा, हिन्दु सापेक्ष राज्य र अधिकार विहीन सांस्कृतिक राजासहितको लोकतन्त्र कांग्रेसको सिद्धान्त, समाजवादी अर्थतन्त्र, मुलुकको समृद्धि र विकास, पञ्चशीलको आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध, असंलग्नताको सिद्धान्त र संसारमै देखिएको वातावरणीय जोखिमबाट मुक्त नेपाल तथा चार जात ३६ वर्णको साझा फुलबारी, तराईदेखि हिमालसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्मका आम नागरिक एउटै हुन् भन्ने सोचका नाराकासाथ कांग्रेसले अब कम्युनिष्ट शासनको शैली र सोचलाई ब्रेक लगाउन थाल्नुपर्छ।
वर्तमान सरकारका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्दै अरुको सहयोग विना आगामी निर्वाचनमा एक्लैले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने गरी कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। अब विद्वान, सिनियर, पुराना खारिएका, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान बनाएका नेताहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्ने र त्यसको नेनृत्व रामशरण महत र शेखर कोइरालाले लिने सोच बनाउँदै छलफल सुरु गरेका छन्।
यसरी हेर्दा कांग्रेसले नयाँ उर्जा प्राप्त गर्ने र कांग्रेसले केही गर्न सक्ने कुराप्रति आम नागरिक विश्वस्त हुन सक्छन्। अहिलेको सरकारले प्रशासन यन्त्रमा देखाएको भेदभाव र अन्याय, सरुवा, बढुवामा गरेको अन्याय, न्यायपालिकाप्रति राखेको दृष्टिकोण र राजनीतिकरण र हास्यास्पद नियुक्ती र अभिव्यक्ति, विरोध र प्रतिरोधलगायतका विषयलाई आम जनताले मुलुकको ऐतिहासिकतालाई जोगाउन र संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्दै गएका छन्।
सही परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न र सहयोग लिन र मुलुकको समृद्ध र विकासलाई सही ढंगले अगाडि बढाउने शक्ति कांग्रेस नै हो भन्ने कुरा अब जनताले बुझिसकेका छन्। त्यसकारण कांग्रेसले अब पार्टीकाे संगठन सुदृढ र सरकारलाई दबावमा राख्न सक्ने गरी कार्ययाेजना बनाउने हाे भने अागामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउने कुरालाई नकार्न सकिँदैन।